FONJA AO ANTALAHA : “Tena manaja ny zon’ny voafonja izahay”, hoy ny Minisitry ny Fitsarana
Nitondra fanitsiana mahakasika ny vaovao navoakan’ny fahitalavitra vahiny iray ny Minisitry ny Fitsarana, Jean Jacques Randrianasolo sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon’ny Governemanta. 28 octobre 2019
Fanaratsiana ny fitondram-panjakana Malagasy ny vaovao navoaka ary tsy marina ny ampahany sasany, hoy ny minisitra. Ny fandraharahana ny fonja eto Madagasikara moa no tena noresahan’ny mpanao gazety vahiny iray tao amin’ny fanadihadiana izay nataony. Voalaza tao anatin’ilay vaovao navoakany koa fa tsy manaja ny zon’olombelona ny mpandraharahan’ny fonja eto Madagasikara satria mahatratra 800 mahery ireo zatovo sy tanora voafonja ao amin’ny fonjan’Antalaha. Nodisoin’ny minisitra tanteraka ity antotan’isa navoaka ity ary nohamarinina niaraka tamin’ny mpanao gazety, solontenam-panjakana, mpandraharahan’ny fonja ny tena isa marina sy mitombina.
Fantatra nandritra izany fa tsy misy afa-tsy 192 ihany no voafonja ao amin’ity toerana ity ary ny ankabeazany dia efa voatsara avokoa. “Ny 57 isan-jaton’ireo voafonja dia efa voatsara avokoa, voahaja ny zon’olombelona, niarahana nahita teto fa misakafo intelo isan’andro ireo voafonja, vary, mangahazo, paty sy ireo maro hafa samy haniny ato avokoa”, hoy ny minisitra, nanazava. “Tena diso be ilay filazana fa mampijaly olona ny fanjakana, tsy mijery ny zo maha olona ny fandraharahana ny fonja. Miezaka hatrany isika manatsara izany ary hita soritra izany amin’ny fananganan’ny fitondram-panjakana ireo fonja vaovao manerana ny faritra maromaro manerana an’i Madagasikara”, hoy hatrany ny Minisitra.
Tsy tokony nasiana fitanilana ny fitantarana ny zava-misy iainan’ny voafonja, hoy koa ny Minisitra Jean Jacques Randrianasolo. Ny tena mampalahelo, hoy izy dia ireo lesoka madinidinika ihany no tena navohitra tao anaty vaovao fa tsy mba noresahina mihitsy ny ezaka lehibe efa nataon’ny fitondram-panjakana sy ny fandraharahana ny fonja ao Antalaha. Notsindriany manokana teto fa tafiditra ao anatin’ny politika ankapoben’ny Fanjakana ny fanajana ny zon’olombelona.